सुरक्षा गार्डहरूमा शरीर लगाएका क्यामेराको प्रभाव | OMG समाधानहरू
सुरक्षा गार्डहरूमा शरीर लगाएका क्यामेराको प्रभाव
दिन बित्दै जाँदा यस संसारको जनसंख्या बढ्दैछ। यसले टेक्नोलोजी र विज्ञानमा पनि तीव्र वृद्धि दिइरहेको छ। अब एक दिन, हामी हाम्रो वरिपरि धेरै उदात्त आविष्कारहरू देख्न सक्छौं। यी आविष्कारहरूले हाम्रो जीवन सजिलो बनाउँदछ। प्रमुख शहरको बढ्दो जनसंख्याको साथ, अपराधको दरमा निश्चित रूपमा ठूलो वृद्धि हुनेछ। शहर पुलिसले हरेक दिन समस्याहरूको सामना गर्नुपर्दछ। उनीहरूको सहजताको लागि, विज्ञानले हामीलाई शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू दिएर मद्दत गरेको छ।
पुलिस अधिकारीहरूमा बडीयो क्यामेराको प्रभाव
बॉडी वर्न क्यामेराले पुलिसको दैनिक जीवनमा ठूलो मद्दत पुर्‍याउँछ। यदि हामी स्पष्ट रूपमा देख्छौं, तब हामी यो उत्पादनमा धेरै लाभहरू देख्न सक्छौं। बॉडी वर्न क्यामेराले पुलिसको दैनिक जीवनमा ठूलो मद्दत पुर्‍याउँछ। यो एक तेर्सो आँखा जस्तो व्यवहार गर्दछ व्यक्तिगत दृष्टिकोणको बृद्धि गरेर। यो भन्न सकिन्छ किनकि कहिलेकाँही व्यक्तिले उसको वरिपरि सानो आँखा आफ्नो आँखाले देख्दैन। तर क्यामेराको साथ, उसले देख्न सक्छ कि बारम्बार सजिलो बनाउँदछ उसलाई सजिलो विवरण देखाउनको लागि। त्यसकारण हामी भन्न सक्दछौं कि यसले पुलिस अफिसरहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ।
के सुरक्षा गार्डहरूले शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्?
शरीर लगाउने क्यामेरा धेरै उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो कि हामीले माथि छलफल गर्यौं, यसका धेरै फाइदाहरू छन्। यसले एक तरीकाले थप आँखा दिएर दृष्टिको भावनालाई तीव्र बनाउँछ। रेकर्ड गरिएको भिडियोले सुरक्षा गार्डहरूलाई धेरै तरिकामा सुविधा पुर्‍याउन सक्छ तर यदि हामी सामान्य कुरा गर्छौं भने हामी देख्न सक्छौं कि सुरक्षा गार्डहरूमा शरीर लगाउने क्यामेराको प्रयोग पुलिस अफिसरहरूको जस्तो छैन।
यद्यपि त्यहाँ कुनै खास नियम छैन जुन सुरक्षा गार्डहरूलाई शरीरमा लगाएको क्यामेरा प्रयोग गर्नबाट रोक्दछ। कम्पनीहरु शरीर पहिरन क्यामेरा संग आफ्नो गार्ड सुसज्जित गर्न सक्छन्। तर सुरक्षा गार्डहरु को मामला मा केहि बेफाइदाहरु हुनेछ।
सुरक्षा गार्ड को मामला मा के फरक छ?
हामी देख्न सक्छौं कि सुरक्षा गार्डहरूको पुलिस अधिकारीहरूको तुलनामा बिभिन्न उद्देश्यहरू हुन्छन्। तिनीहरूलाई अन्य स्थानहरूमा यात्रा गर्नु आवश्यक पर्दैन। साथै, ती छानबिनको लागि कहिँ पनि जान सक्दैनन्। तसर्थ, शरीर पहिरिएका क्यामेरा सुरक्षा गार्डको सट्टा पुलिस अफिसर प्रयोगको लागि अलि बढी उपयुक्त छन्। जहाँसम्म, यदि सुरक्षा गार्डले केही हिंसा निर्माताहरू वा लुटेराहरूसँग मुठभेड भयो भने, शरीरले लगाएका क्यामेराहरूले उनीहरूको अनुहार रेकर्ड गरेर उत्तम आउटपुट प्रदान गर्दछ। तर शरीरमा लगाएको क्यामेराको साथ गार्ड लैजानको चलन धेरै कम्पनीहरूमा देखिएको छैन।
किन अधिकांश कम्पनीहरूले उनीहरूको गार्डमा शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू प्रयोग गर्दैनन्:
हामीले धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो गार्डहरूलाई शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू लैजान देखेका छैनौं। त्यहाँ केहि आधारभूत कारणहरू छन्। तिनीहरूलाई हेरौं:
मुख्य समस्या जसको कारण अधिकांश कम्पनीहरूले शरीरमा लगाउने क्यामेराको साथ आफ्नो गार्डहरू लैजान सक्षम छैनन् यी क्यामेराको उच्च मूल्य हो। उदीयमान टेक्नोलोजीको साथ, बडि क्यामेराको साथ सुरक्षा अधिकारीहरू लैजानको लागत अधिक सस्तो हुँदै गइरहेको छ तर यो महत्वहीन छैन। एकल शरीर लगाउने क्यामेरा सेट बजारमा एकदम महँगो हुन सक्छ। यसको लागत $ 700- $ 800 हो। किन कम्पनीहरूले उनीहरूको सुरक्षा गार्डहरूको लागि महँगो क्यामेरा किन्न आवश्यक छ? पुलिस विभाग पनि उही समस्याको सामना गर्दैछ।
देशको पुलिस विभाग विशाल छ जसलाई अफिसरहरूको लागि ठूलो संख्यामा क्यामेरा आवश्यक पर्दछ। हामीसँग एक अनुमान छ कि एक अफिसरको लागि प्रत्येक क्यामेराको लागि लगभग $ 800 खर्च हुन्छ जुन विभागको लागि बोझ हो। तसर्थ, यो शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू प्रयोग गर्ने एक ठूलो कमजोरी हो।
अर्को कुरा जसले कम्पनीहरूलाई उनीहरूको सुरक्षा गार्डका लागि शरीरमा लगाउने क्यामेरा किन्न अनुमति दिदैन, त्यो आवश्यकता हो। हामीले अघि नै छलफल गरिसकेका छौं, त्यहाँ गार्डको कर्तव्य घडीमा शरीरमा लगाएको क्यामेराको खास खाँचो छैन। यद्यपि यसले गार्डको प्रदर्शनलाई प्रभाव पार्छ तर यसले पुलिस अधिकारीहरूलाई असर गर्दैन। त्यसकारण कम्पनीहरूले उनीहरूको सुरक्षा गार्डहरूको लागि शरीर लगाउने क्यामेरा किन्न आवश्यक महसुस गर्दैनन्।
यो स्पष्ट छ कि नयाँ टेक्नोलोजीहरू र सामाजिक नेटवर्कहरूको उद्भवले उनीहरूको गोपनीयता विचार गर्ने तरिकामा परिवर्तन आएको छ, तर शरीरमा लगाउने क्यामेराले बनाएको रेकर्डिंगले अनुहार पहिचान टेक्नोलोजीको सम्भावित प्रयोगको लागि अनुमति दिन सक्छ।
शरीरमा लगाइएको क्यामेराको प्रयोगले गार्डहरूलाई संवेदनशील परिस्थितिहरू रेकर्ड गर्न अवसर दिन्छ, तर त्यसबाट पार गर्ने व्यक्तिको अनुहार रेकर्ड गर्न पनि उनीहरूको गोपनीयता खराब हुन्छ। त्यस सम्बन्धमा, केही कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूले कारबाही लिएका छन् र यसलाई व्यक्तिहरूको गोपनीयता बिरूद्ध घोषणा गरेका छन्। यो, परिणाम स्वरूप, कम्पनीको लागि राम्रो छैन।
अफिसलाई केवल शरीर क्यामेरा दिन र अफिसरलाई बाहिर गएर यसको प्रयोग गर्न भन्नु पर्याप्त छैन। क्यामेराको प्रयोगका बारे नीतिहरू (जब क्यामेरा खोल्नु वा बन्द गर्नुपर्दछ, जब व्यक्तिहरू रेकर्ड भइरहेको छ भनेर जानकारी गराउन, डाटा कसरी अपलोड गर्ने आदि आदि) स्थापना गरिनु पर्दछ र अधिकारीहरूलाई नीतिमा प्रशिक्षण दिनुपर्नेछ।
शारीरिक पहिरन क्यामेरा सुरक्षा गार्ड को व्यवहार अनुगमन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले गार्डलाई राम्रोसँग व्यवहार गर्दछ। सबै कुरा रेकर्ड भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि ऊ अरूसँग चकनाचूर हुनेछैन। एकै साथ गार्डसँग कुरा गर्ने व्यक्ति पनि राम्रो रेखदेख र अनुशासित हुन कोशिस गर्दछ किनकि उसको अभिलेख राखिएको छ। तसर्थ, कम्पनीहरूले उनीहरूको गार्डहरू मोनिटर गर्न यी क्यामेराहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्।
सुरक्षा गार्डहरूमा शरीर लगाएका क्यामेराको प्रभाव पछिल्लो पटक परिमार्जित गरिएको थियो: सेप्टेम्बर 26th, 2019 by व्यवस्थापक
3327 कुल दृश्यहरू3हेराइ आज